Polycarboxylate Superplasticizer / PCE Fekitori - China Polycarboxylate Superplasticizer / PCE Vagadziri, Vatengesi
JS -103 Polycarboxylate superplasticizer 50% (Yakakwira Yekuderedza mhando)
JS-103 chizvarwa chitsva cheakakwira kuita polycarboxylic acid superplasticizer yakagadzirirwa kubva methyl allyl alcohol polyoxyethylene ether macromonomer neyakajeka radara polymerization, ine 50% yakasimba zvemukati.
JS-104 Compound polycarboxylate Superplasticizer 37.5% (Mvura inoderedza mhando)
JS-104 yekambani yedu yazvino yekutsvaga uye yekuvandudza zvigadzirwa, ichishandisa yazvino nyowani polyether matanhatu kabhoni monomer. Rudzi rwechigadzirwa rune yakaderedza mwero wekuderedza mvura, iri pamusoro kupfuura JS-103, uye ine yakanyanya-yakakwira slump yekuchengetedza kuita.
Ichi chizvarwa chechitatu kuita kwakanyanya uye eco-inoshamwaridzika poly carboxylic acid plasticizer, yakagadzirwa nekambani yedu yakanangana neupfu plasticizer. The upfu iri kupatsanurwa yemhando pfapfaidzo nokuomesa michina. Iyo poda inodzika yunifomu muhukuru, ine yakanaka fluidity, yakaderera hydrophobicity